Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kalkaaliyeyaasha Ontaariyo: Walaaca weyn ee Qorshaha Dib-u-furista Cusub
Dawladda Ontaariyo waxay digniin u diraysaa dabaysha waxayna halis gelinaysaa horumarka gobolku ka sameeyay ilaalinta faafitaanka fayraska COVID-19.
Ururka kalkaaliyaasha ee Ontario (RNAO) ayaa sheegay in awoodda gobolka ee lagu xakameynayo faafitaanka caabuqa marka aan galayno bilaha qabow ay ku khamaarayaan qorshe dib u furid kaas oo kor u qaadaya xaddidaadda awoodda Isniinta, Oktoobar 25, oo meesha ka saaraysa Tallaabooyinka caafimaadka dadweynaha - oo ay ku jiraan u baahan caddaynta tallaalka - horraantii Janaayo.
RNAO waxay sidoo kale aad uga walaacsan tahay dowladdu inay dooratay inaysan ku dhawaaqin tallaalka khasabka ah ee dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee dhammaan qaybaha iyo goobaha. Dardaarankani waxa uu horeba u yaaley kuwa ka shaqeeya daryeelka muddada-dheer, iyada oo leh kama dambaysta in ay u hoggaansamaan Noofambar 15. Isbitaalo badan oo daryeelka degdega ah ayaa qaadaya tallaabo la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, habkan patchwork ee siyaasadda ee ay waddo dowladda Ford waxay bukaannada iyo shaqaalaha ka dhigeysaa isbitaallada, daryeelka guriga iyo goobaha kale ee bulshada xitaa heer nuglaanta sare haddii shaqaalaha aan la tallaalin ay hal meel uga tagaan mid kale oo leh shuruudo dabacsan.
Baahida dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada in si buuxda loo tallaalo waa siyaasad ku salaysan caddaynta, oo markii ugu horreysay ay RNAO u yeertay Luulyo 2021, oo ay dhowaan taageertay Miiska Sayniska ee dawladda. In la iska indho tiro taladan waxay ka hor imanaysaa caqligalka, waa masuuliyad darro waxayna wax u dhimaysaa daryeelka bukaanka iyo badbaadada shaqaalaha.
RNAO waxay ku boorinaysaa dadka inay sii wadaan saxeexa digniinta Waxqabadka iyagoo dalbanaya Premier Ford inuu kordhiyo tallaalada qasabka ah dhammaan daryeelka-caafimaadka iyo shaqaalaha waxbarashada oo uu ka sameeyo aagag nabdoon agagaarka goobahooda shaqada. Ururku wuxuu ku doodayaa inay kuwani yihiin tillaabooyin lagama maarmaan ah si looga hortago COVID-19 madaxa.